Raad -raac baakadaha [SF/ SF Express/ SF Express] | [SF/ SF Express/ SF Express] macluumaadka raadraaca maraakiibta | BT.17CKD.COM
Ku noqo hoyga bogga >> Raad -raac baakadaha [SF/ SF Express/ SF Express]
Si toos ah u aqoonsan lambarka raadraaca xirmada. >>
Bogga rasmiga ah ee [SF/ SF Express/ SF Express]: 「www.sf-express.com」
Waad raadin kartaa oo raadin kartaa 100 lambarrada raadinta saadka ee [SF/ SF Express/ SF Express] waqti isku mid ah mar kasta.
Waxaad raadin kartaa oo raadin kartaa ilaa 100 xirmooyinka maraakiibta markiiba, oo lambar kasta oo raadraaca maraakiibtu wuxuu hayaa hal sadar. Haddii tirada guud ee baakadaha ay kor u dhaafto 100, nidaamku wuxuu si otomaatig ah u iska indho -tiri doonaa lambarka raadinta saadka ee dhaafay xadka tirada ugu badan!
「 Tirada guud ee baakadaha saadka ee aad gelisay: 0 」
dhammaan Looma helin macluumaadka raadadka saadka Xidhmadu wali waxay ku jirtaa transit ... Xirmada ayaa la gaarsiiyay meeshii loogu talagalay! Xidhmadii ayaa lagu celiyay meeshii laga dhoofay! Badeecada ayaa si ku -meelgaar ah loo xiray oo kastamku u kuur -galay! Xaalado kale oo aan caadi ahayn inta lagu jiro gaadiidka!
nambarada taxan Lambarka dabagalka saadka Xaaladda gaadiidka saadka Isha xogta Taariikhda iyo saacadda u dhiganta saadka iyo macluumaadka gaadiidka ee ugu dambeeyay wakhtiga bixitaanka Wakhti gaadiid wadar Goobta adeegga saadka Macluumaadkii ugu dambeeyay ee saadka iyo gaadiidka Eeg faahfaahin dheeraad ah
「 Ma jiro wax xaddidan erayga nuxurka la koobiyeeyay iyadoo la isticmaalayo badhankan. Waxaad ku dabaqi kartaa nuqulada la koobiyeeyay barnaamijyadan: iimayl, txt document, Office Word, iwm.
Haddii wadarta tirada baakadaha ay ka badan tahay 15, Fadlan ha u isticmaalin nuxurka aad ku soo guurisay daaqadda wada hadalka wada sheekaysiga ee softiweerka bulshada, maxaa yeelay badiyaa daaqadaha sheekadoodu waxay yeelan karaan xadka erayga oo adag. 」
「Haddii wadarta tirada baakadaha aysan ka badnayn 15, Waxaad isticmaali kartaa badhankan turjumaada. Sababtoo ah tirinta ereyga ee Turjubaanka Google wuxuu ku kooban yahay 5,000 oo xaraf. 」
「Sababtoo ah tirada guud ee baakadahaagu waxay dhaaftay 15, Waxaad isticmaali kartaa badhanka go'an ee hoose si aad u nuquliso ama u turjunto macluumaadka raadraaca xirmada ee la cayimay, iyo tiro kala duwan oo taxane ah ayaa u dhigma badhamno go'an oo kala duwan. ↓」
↓ Geli ereyada raadinta si aad u hesho macluumaadka raadraaca xirmada ↓
Haddii nidaamku ka helo ereygaaga raadinta macluumaadka raadraaca xirmada,
Midabka asalka ah ee ereyga furaha ahi wuxuu noqonayaa madow!
「 Tirada guud ee baakadaha si guul leh ugu habboon ereyga raadinta: 0 」
↓ Buuxi wakhtiga dib u dhaca maraakiibta ee xirmadaada ↓
maalmood / saacadood / daqiiqo / ilbidhiqsi.
Haddii wadarta waqtiga gaadiidka xirmadaadu ka badan tahay waqtiga dib -u -dhigga ee aad soo gashay,
Midabka asalka ah ee liiska ayaa loo beddeli doonaa bunni!
Xaaladda dhoofinta ee xirmada maraakiibta waxaa loo beddeli doonaa: * Dib -u -dhaca gaadiidka saadka.
Waxaad gujin kartaa badhanka [Ka saar Calaamadda Daahitaanka] si aad u soo celiso midabka asalka ah ee liiska!
「 Tirada guud ee baakadaha saadka ee dib u dhacay intii lagu jiray gaadiidka: 0 」
「 Macluumaadka Shirkadda 」: SF Express waxay ku tiirsan tahay bakhaarkeeda iyo kheyraadka shabakadda gaadiidka ee u gaarka ah si ay ugu abuurto adeegyo saadka hal mar ah macaamiisha e-commerce. SF Express waxay ku tiirsan tahay kheyraadkeeda gaadiid oo aad u badan si ay u daboosho baahiyaha kala duwan ee macaamiisha iyada oo loo marayo tiro badeecooyin kala duwan ah iyo adeegyo lagu daray.
「 Bogga rasmiga ah 」: www.sf-express.com
「 Tilmaamaha adeegsiga degelkan - 1 」: Xaalado gaadiid oo kala duwan ayaa u dhigma midabyo kala duwan. Tirada guud ee baakadaha waxaa lagu muujiyey hoosta magaca xaaladda. Markaad gujiso lambarka, midabka asalka ah ee liistada ayaa isbaddeli doona.
(1) “Looma helin macluumaadka raadadka saadka” -> Cadaan,
(2) “Xidhmadu wali waxay ku jirtaa transit ...” -> Midabka miiska wuxuu isu beddelaa oranji,
(3) “Xidhmadii ayaa lagu celiyay meeshii laga dhoofay!” -> Midabku wuxuu isu beddelaa casaan,
(4) “Xirmada ayaa la gaarsiiyay meeshii loogu talagalay!” -> Midabkii wuxuu isu beddelay cagaar,
(5) “Badeecada ayaa si ku -meelgaar ah loo xiray oo kastamku u kuur -galay!” -> Purple,
(6) “Xaalado kale oo aan caadi ahayn inta lagu jiro gaadiidka!” -> Midabkii wuxuu isu beddelay buluug.
「 Tilmaamaha adeegsiga degelkan - 2 」: Markaad u isticmaasho degelkan si aad u raadiso xirmadaada saadka markii ugu horreysay maalin gudaheed, nidaamku wuxuu ku samayn doonaa hubinta amniga barowsarkaaga, waxaadna u baahan tahay inaad sugto qiyaastii 6 illaa 10 ilbidhiqsi.
(1) Ka dib marka raadinta raadintu dhammaato, haddii aad aragto sawirkan: " ", Tani waxay ka dhigan tahay in dabeecaddaada raadraaca ama cinwaanka IP -ga uu yahay mid laga shakiyo, ama aad furto bogag badan oo isku mar ah oo aad si joogto ah u isticmaasho, sidaa darteed nidaamka degelkan wuxuu ka hor istaagayaa aaladdaadu inay gasho degelkan.
(2) Ka dib marka raadinta raadintu dhammaato, haddii aad aragto sawirkan: " ", Taas micnaheedu waa in server -ka degelkan uusan dhammaystirin dayactirkiisa. Fadlan sug ilaa 1 daqiiqo ka hor intaadan bogga bogsiin oo isku day mar kale.
「 Tilmaamaha adeegsiga degelkan - 3 」: Kadib raadinta nidaamka ayaa dhammaatay, haddii ay jiraan ugu yaraan 1 xirmo maraakiib ah oo aan heli karin macluumaadka raadraaca xirmada, waxaad adeegsan kartaa badhanka [Raadin qoto dheer], laakiin waxaad u baahan doontaa inaad sugto waqti dheeri ah.
「 Caawinaad iyo tilmaamo 」: Haddii aad ka heli karto macluumaadka raadraaca xirmada bogga rasmiga ah ee [SF/ SF Express/ SF Express], laakiin ma heli kartid macluumaadka raadraaca xirmada adoo adeegsanaya degelkan, fadlan ii soo dir emayl si aad iigu sheegto xaaladdan: "emmis@qq.com".
Nuxurka emailka: "Bogga rasmiga ah ee [SF/ SF Express/ SF Express]" + "I sii 3 lambarrada raadraaca [SF/ SF Express/ SF Express].
(Lambaradan raadraaca xirmada waa inay awoodaan inay adeegsadaan degelka rasmiga ah ee shirkadda si ay u helaan macluumaadka raadraaca xirmada!)".
Waxaan wax ka qaban doonnaa oo ka jawaabi doonnaa su'aalahaaga sida ugu dhaqsaha badan kadib markaan helno emaylkaaga! Waad ku mahadsan tahay taageeradaada iyo fahamkaaga!!
「 Ogeysiisyada Sharciga 」: Websaydaan ma aha degelka rasmiga ah ee DHL, mana ka qayb qaadanno hawlaha saadka ee shirkadda. Websaydhkani waa uun goob loogu talagalay raadinta iyo weydiinta baakadaha gaadiidka, wuxuuna ku siinayaa adeegyo raadin xirmo xirmo oo bilaash ah.
Haddii aad qabto su'aalo kale oo ku saabsan xirmada [SF/ SF Express/ SF Express], fadlan si toos ah ula xiriir macluumaadka rasmiga ah ee xiriirka ee shirkadda saadka: 「www.sf-express.com」.